लैङ्गिक हिसावले हरेक नारी पुरुषप्रति आकर्षित हुन्छे । तर यसो भन्दैमा सबै नारी हरेक पुरुषप्रति आकर्षित भैहाल्छन् भन्ने चाँहि छैन । अझ एक अध्यनले त पाँच प्रकारका पुरुषलाई महिलाले घृणा गर्ने देखाएको छ । घमण्ड देखाउनेः हुनत समाजलाई अझै पनि पुरुष प्रधान भन्ने गरिन्छ तर अहिलेका स्त्रीले आफू ठूलो हुँ भनेर रवाफ प्रस्तुत गर्ने पुरुषलाई...
दाम्पत्य जीवन सधै एकनास रहँदैन । कहिले कहिं सामान्य मनमुटावले ठूलै झगडाको रुप लिन्छ । त्यसले सम्बन्ध दुई चिरा पनि पार्न सक्छ ।दम्पतीबीच यादकदा ठाकठुक पर्नु सामान्य नै हो । तर, आपसी बैमनश्यता, इगो, अविश्वास, असहयोगले दाम्पत्य जीवन क्रमस तहसनहस बनाउँदै लान्छ । पति-पत्नीले कहिले पनि दाम्पत्य सुख भोग गर्न सक्दैनन् । वैवाहिक सम्वन्ध दिगो...
पत्रु खानाले चाँडै पुर्‍याउला मृत्युलोक ! के खाने–के नखाने ֍ डा.अरुणा उप्रेतीको सुझावहरु (भिडियो)
‘खाना खानुभयो ?’ आम नेपालीले सधैँ सोध्ने साझा प्रश्न हो यो । हामी जसरी सजिलै खानाको बारेमा सोध्छौँ तर यसबारे चिन्तित चाहीँ छैनौँ । कस्ता खाना खाने ?, कस्ता खानाले स्वास्थ्यमा असर पुर्याउँछ ? भन्नेबारे जानकारी भए पनि सचेतना नभएको बताउँन् चिकित्सकहरु । आम मानिसमा खानाको विषयमा सचेतना नहुँदा नै ठूला स्यास्थ्य समस्या निम्तिने गरेको...
दार्शनिकका कुराः यदि श्रीमती बारम्बार रिसाउँछिन् भने श्रीमानले के गर्ने ֍
महान् युनानी दार्शनिक सुकरातको व्यवहारमा कुनै अहंकार थिएन । उनी निकै लोकप्रिय, अत्यन्त सहज, सहनशील र विनम्र स्वभावका थिए । नम्र स्वभावका सुकरातकी श्रीमती भने निकै रिसालु थिइन् । उनी स–सानो कुरामा रिसाउने र झगडा गर्दथिन् तर सुकरात भने शान्त नै रहन्थे भनिन्छ । जब श्रीमतीले सुकरातलाई खन्याइदिइन् पानीः एक पटक सुकरात आफ्ना शिष्यसँग घर...
डिनरपछि के गर्ने के नगर्ने ֍
मानिस बेलुकीको खानापछि शारीरिक श्रम गर्दैनन् । जसका कारण बेलुकीको खानामा विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । सकेसम्म बेलुकीको खाना कम प्रोटिनयुक्त हुन अवश्यक छ । डिनरमा शरीरले पचाउन सक्ने खाना मात्र खानुपर्छ । नत्र विभिन्न रोग देखा पर्न सक्छ । बेलुकीको खाना खाइसकेपछि जंकफुड खाने गल्ती कहिल्यै गर्नु हुँदैन । – कतिपयले खानापछि चिया-कफी...
के हो सेक्सको लत या सेक्स एडिक्सन ֍
कुनै पनि कुराको लत लग्नु राम्रो हैन। चाहे त्यो रक्सीको होस् चुरोट खैनीको होस् या अन्य कुनै कुराको लत यसले मानिसको सामाजिक र व्यक्तिगत जीवनलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ। लत जेको पनि हुन् सक्छ र कतिपय मान्छेमा सेक्सको पनि लत हुन्छ भन्ने सुन्दा तपाईं-हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ। सामान्यतयाः ‘सेक्स एडिक्सन’ या ‘यौनको लत’को बारेमा मानिसहरू खुलेर कुरा...
२४ वर्षीया उपमा (नाम परिर्वतन) को कथा केही फरक छ । स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी उपमाले आमाको पाठेघरमा पलाएको ट्युमरको उपचार गराउन एउटा फाइनान्समा रिसेप्सनको जागिर सुरु गरेकी थिइन् । जागिर थालेको एक हप्ता पनि नबित्दै उनी फाइनान्समा नियमित आउने एक ग्राहकसँग नजिकिइन् । ती ग्राहकले उनलाई एकपटकका लागि २५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरे । त्यत्रो पैसा पाइने भएपछि...
स्वास्थको लागि माछा उपयुक्त कि मासु ֍
पौष्टिक दृष्टिकोणले माछा–मासु पोषिलो खाना हो । तर, आवश्यकभन्दा बढी खाएमा यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । स्वस्थ व्यक्तिले पनि कस्तो प्रकारको मासु कति खाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा विचार पु¥याउनुपर्छ । झन् उच्च कोलेस्टेरोल, उच्च रक्तचाप, युरिक एसिड र मुटुसम्बन्धी समस्या भएकाहरूले मासु खाँदा धेरै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । साधारणतयाः मासु प्रोटिनको राम्रो...
कस्ता व्यक्तिले कागती-पानी पिउनु हुँदैन֍
सामान्यतः कागती-पानी पिउनु राम्रो मानिन्छ । तर केही मानिसलार्इ कागती पानी पिउनाले नोक्सान पनि पुर्याउन सक्छ । यसले व्यक्तिको स्वास्थ्यसम्बद्ध समस्याहरूलार्इ झन् जटिल बनाउन सक्छ । कागतीमा पाइने केही तत्वले जसले टसम्बन्धी समस्यालार्इ बढाउनुका साथै दाँतमा समस्या निम्त्याउँछ । यस्ता ५ किसिमका रोग वा समस्या भएका व्यक्तिहरूले कागती-पानी पिउनु हुँदैन:- कागती पानीमा एसिडको मात्रा धेरै...
गर्मीमा पसिना गन्हाउँछ ֍ यस्ता छन् प्रभावकारी उपायहरू
के तपाई पनि गर्मीमा आउने पसिना गन्हाएर हैरान हुनुहुन्छ ? पसिनाकै कारण कसैको अगाडि जान हिच्कीचाउनु हुन्छ ? चिन्ता नगर्नुस्, यस्तो समस्याबाट सजिलै छुट्कारा पाउन र ताजा महसुस गराउन विभिन्न उपायहरु अपनाउनुस् । पुरुषको लागी उपाय नुहाइसकेपछि कागतीको रस, तथा अन्य फुलको रसबाट बनेको पर्फ्युम प्रयोग गर्नुहोस् । यसले शरिरमा सुगन्ध छाउने छ । एकदमै...
प्राय हामी पेन्सिलको प्रयोग लेख्नका लागी गर्छौ, तर हामीमध्ये धेरै कमलाई मात्र पेन्सिलले शरिरको दुखाईमा पनि राहत पुर्याउने थाहा छ । पेन्सिलको प्रयोगबाट पनि शरिरको दुखाईको उपचार गर्न सकिन्छ भन्दा धेरैलाई अचम्म पनि लाग्न सक्छ । हो पेन्सिलको प्रयोगले पनि शरिरको दुखाई कम गर्न सकिन्छ । मानिसको शरिरको दुखाई तथा तनाव कम गर्नका लागि गरिने...
हामी दैनिक जसो नै पाउरोटी खान्छौं । कसैलाई त नियमित नै पाउरोटी खान मन पर्छ । तर दैनिक जीवनमा धेरै नै उपभोग हुने मैदाको पाउरोटी अर्थात ह्वाइट व्रेड स्वास्थ्यका लागि भने खतरनाक हुन सक्छ । निम्न कारणले सेतो पाउरोटी खाँदा सचेत हुनु जरुरी छ । १. पाउरोटीमा प्रयाप्त पोषक तत्व हुँदैनः अन्य खानामा जस्तो सेतो...
र्तमान समयमा आफ्नो तौल बढ्नु हरेक उमेरका मानिसको लागि समस्या बन्ने गरेको छ । बढिरहेको तौल रोक्नका लागि जोकोहीलाई आफ्नो दैनिक जीवन परिवर्तन गर्न मुस्किल हुन्छ । तर, केही घरेलु तरिकाहरू अपनाएर पनि तपाईले आफ्नो तौललाई ठिक ठाऊँमा राख्न सक्नुहुन्छ । यस्ता केही घरेलु तरिकाहरू यस्ता छन्… – स्याऊ स्वास्थ्यका लागि लाभदायक फल मानिन्छ ।...
काउछो नेपालीमा काउछो भनेर चिनिने यो जडीबुटीको वैज्ञानिक नाम मक्युना प्रुरिन्स हो । संस्कृतमा यसलाई कपिकच्छु या आत्मगुप्ता भनिन्छ । नेपालको तराईदेखि चार हजार पाँच सय फिटसम्मको उचाइ भएको पहाडी क्षेत्रमा जताततै पाइन्छ । लहराजस्तो देखिने यसको फल झुप्पामा फल्छ । यसको फल सिमीजस्तो आकारको २–४ इन्च लामो र ०.५ इन्च चौडा हुन्छ । कोसेदार...
लामो आयुको चाहना सबैको हुन्छ । तर, दैनिक जीवनमा हामी यस्ता काम गर्दछौ जसले हाम्रो जीवनका केही घण्टा, केही दिन वा केही वर्ष कम हुँदै जाने गर्दछ । तपाई पनि त्यसै त गरिरहनु भएको छैन ? टेलिभिजन : ब्रिटिश र्जल अफ स्पोर्टस एण्ड मेडिसिनमा प्रकाशित एउटा रिपोर्ट अनुसार टेलिभिजनको हरेक एक घण्टाले तपाईको जीवनको २२...
तपाइँहरू आफ्नो बेडरुममा भएको बेला यी कुराहरु भुलेर पनि नगर्नुहोस् । यदि यी कामहरू गर्नुभयो भने तपाइँको सेक्स लाइफनै खतरामा पर्न सक्दछ । १. बेलुकीको खाना धेरै ढिला खाने काम नगर्नुसः यदि तपाइँ बेलुकीको खाना धेरै ढिला खाने गर्नुहुन्छ भने यसले तपाईंको तौल मात्र बढाउने नभै तपाईंको सेक्स लाइफलाई नै डामाडोल बनाउँदछ । त्यसैले बेलुकीको...
अनलाइन डेटिङ गर्नुहुन्छ ֍ यी ८ कुरा विचार गर्नुस्…
हिलेको विश्व इन्टरनेटको जालोमा बेरिएको छ । इन्टरनेटको प्रयोगले मानिसलाई विश्वका हरेक कुनाको अवस्ताबारे जानकारी दिनुका साथै हरेक ठाऊँका मानिससँग मित्रता समेत गास्ने मौका दिएको छ । मानिसहरू इन्टरनेटबाटै साथी बन्ने, प्रेम गर्ने र विबाह गर्ने सम्मका काम समेत गर्न थालिसकेका छन् । हुँदा हुँदा मानिसहरू डेटिङ समेत अनलाइनबाट नै गर्न थालिसकेका छन् । इन्टरनेटबाटै...
प्रेम अभिव्यक्त गर्ने दिवस अर्थात प्रणय दिवस फ्रेबुअरी १४ अर्थात आज मनाइदै छ। रातो गुलाफ, गुलिया चकलेट अनि टेड्डी बियर! यो हप्ता अधिकांश युवा युवतीले घुमघाम अनि रमाइलोमा बिताए। नहुने साथीसंग घुमे, हुनेले गर्लफ्रेन्ड अनि व्वायफ्रेन्डसंग समय बिताए। ‘भ्यालेन्टाइन विक’ को अन्तिम दिन आज भ्यालेन्टाइन डे, आउनुस् जानौ यौन र प्रेमको बारेमा ५ रोचक जानकारी:...
भनिन्छ नि- ‘एउटा झूट कुरा लुकाउन सय झूट बोल्नुपर्छ!’ फेरि त्यहि झूटलाई पनि कहाँ धेरै दिनसम्म लुकाउन सकिन्छ र? आज जसरी तसरी सत्य कुरा लुकाइएला, तर कुनै न कुनै दिन त सत्य सामुन्ने आइ नै हाल्छ। अनि जब घर-परिवार र समाजले त्यो सत्य कुरा थाहा पाउँछन्, तब सबैको सामुन्ने अपमानित हुनुपर्छ। तीतो नै किन नहोस्...
कतै तपाइ कण्डम किन्दा यस्तो गल्ती त गर्नुहुन्न ֍
‘साहुजी एक जोर जुत्ता दिनुस् त’ भन्दै तपार्इँ पसलबाट जुत्ताको प्याकेट लिएर फर्किनुहुन्छ त ? पक्कै पनि तपाईं पहिला साइज नाप्नुहुन्छ । ब्रान्ड जाँच्नुहुन्छ । चित्त बुझे अनिमात्रै जुत्ता किन्नुहुन्छ, हैन त ? त्यसो हो भने कण्डम नि ? के तपाईंले कण्डम किन्दा कहिल्यै जुत्ता वा अन्य कुनै वस्तु चेकजाँच गरेझैँ किन्नुभएको छ त ?...
बुधबार बुध ग्रहको लागि समर्पित गरिन्छ । यस दिन गरिने केही कर्मले जिन्दगी भरी फल दिन्छ । बुधबार के गर्दा जिन्दगी समृद्ध हुन्छ, जान्नुहोस् । बुधबार गणेश भगवानको पूजा गर्नु फलदायी मानिन्छ । मन्दिर वा घरैमा गणेश भगवान वा दुर्गालाई पूजा गर्दा छिट्टै शुभ खबर पाइनेछ । बुधबार मुंगको दाल दान गर्दा कष्ट निवारण हुन्छ...
एजेन्सी/ यदि तपाई बच्चाको योजना बनाइरहनुभएको छ, तर सफल हुन सक्नुभएको छैन भने तपाईमा कुनै असर छ । त्यो असर तपाईले खाने डाइटको असर हुन सक्छ । जुन कारणले तपाईको प्रजनन क्षमतामा कमजोरी ल्याइरहेको छ । हेर्नुहोस्, यी पाँच चिजको प्रयोगले पुरुषमा बाँझोपन ल्याउछ । चिया/कफी चिया कफीको प्रयोग तपाईलाई निकै महंगो पर्न सक्छ ।...
सिन्धुली / “रवितालाई महिनावारी भएको रहेछ । पहिलोपटक महिनावारी हुँदा तल्लो पेट त दुख्छ नै । कसैलाई बढी दुख्छ । कसैलाई कम । नआत्तिनु भनेर सम्झाई दिएको छु । निरन्तर दुखिरह्यो भने आउनु भनेको छु । यस्तो बेलामा सुरक्षित रुपमा कसरी प्याडको प्रयोग गर्ने भन्ने सिकाइदिएँ”, अनमि सुदीच्छा कोइराला जवाफ दिँदै थिइन् । “बाबु !...
वैज्ञानिकहरुले गरेको सोधका क्रममा उनीहरुले शरिरको मोटोपन घटाउन सक्ने तथा अर्को मधुमेह कम गर्न सक्ने ब्याटेरिया पत्ता लगाएका छन् । ‘प्रोसिडिङ्ग्स अफ नेशनल एकेडेमी अफ साइन्सेज’मा प्रकाशित अनुसन्धानले दिएको रिपोर्टका अनुसार मुसामा गरिएको अध्ययनबाट यस्तो तथ्य पत्ता लागेको दावी गरिएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको अनुसन्धानका क्रममा मुसामा देखीएको शारिरिक वदलावले यस्तो पुष्टी गरेको दावी गरेका छन्...
किम्बुको अङ्ग्रेजी नाम व्हाइट मलबेरी हो । यसले ट्युमर , मधुमेह जस्ता रोगहरुलाई निको पार्नुको साथै विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धि फाईदाहरु पुर्याउँदछ । धेरै बिरुवाहरु रोगलाई निको पार्ने गुण भएपनि औषधिको रुपमा चिनिदैंन । किनकी यसको प्रयोग धेरैजसो अरु औद्योगिक उद्येश्यको लागि मात्र गरिन्छ । यस्तै किसीमको प्रयोग किम्बुको रुखको पनि हुन्छ । किम्बुको रुखको प्रयोग काठ...
ओठलाई सुन्दर बनाउने माध्यम लिपिस्टिक पनि हो । बजारमा विभिन्न रङमा लिपिस्टिक पाईन्छ । यसको गुणस्तर अनुसारको मूल्य तोकिएको हुन्छ । लिपिस्टिक सक्कली ब्राण्डको मात्र प्रयोग गर्नु राम्रो हो । तथापि सबै रङका लिपिस्टिकहरु सबैलाई सुहाउँदैन । यस्ता लिपिस्टिक पनि विभिन्न समारोह अनुसार फरक फरक रङको प्रयोग गर्नु नै बुद्धिमानी हो । आफुले कस्तो रङको...
धेरै मानिसहरुलाई लाग्छ, क्यान्सर केवल रक्सी, चुरोट र सुर्तिले मात्रै लाग्छ । यी चिजहरुको सेवन नगर्ने व्यक्तिहरुलाई क्यान्सरले छुनै नसक्ने भ्रममा उनीहरु छन् ।तर, यो सत्य होइन । यी तीन चिजका अलावा पनि थुप्रै यस्ता खानेकुराहरु छन् जसको नियमित सेवनले क्यान्सरलाई निम्तो दिन सक्छ । यहाँ हामी यस्तै खानेकुरारुबारे चर्चा गर्दैछौं । पपकर्न भुटेको मकै...
काठमाडाैं- यौनका बारेमा व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक बुझाइ हुन सक्छ । तर एउटा समान धारणा के हुन्छ भने सबै यसमा गोप्यता चाहन्छन् । यौन शरीरको यस्तो आवश्यकता र चाहना हो जसलाई मान्छेले सधैँ नियन्त्रणमा नराख्न पनि सक्छ । चाहेको वेला यौन चाहना पूर्ति नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा विकल्पका रूपमा सेक्य टोयहरू रोजाइमा पर्न थालेका छन्...
सोयाविन एउटा यस्तो शाकाहारी भोजन हो जसमा मांसहारमाभन्दा पनि धेरै प्रोटीन र पोषक तत्व पाइन्छ । यसको प्रयोग विभिन्न तरहले समेत हुने गरेको छ । सोयाबिन खानाले तपाई सुन्दर समेत देखिनुहुनेछ । सोयाबिनमा ओमेजा–६, ओमेगा–३, फाइबर जस्ता तत्वहरु रहेका हुन्छन् । यसको प्रयोगले विरामीहरुलाई राहत मिल्छ । जो मानिसहरु बारम्बर सोयाविन खाने गर्छन् उनीहरु छिटो...
काठमाडौं। धनियाँले विभिन्न रोगबाट बचाउन सहयोग पुर्याउन सहयोग गर्छ । जसका लागि धनियाँको दाना भिजाएको पानी नियमित पिउने गर्नुपर्छ । धनियाँमा भएको पोटासियम, भिटामिन सी, क्याल्सियम र म्याग्नेसियमले शरीरमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसले पेटको समस्याबाट पनि बचाउने काम गर्छ । नियमित धनियाँको पानी प्रयोग गर्दा कलेजोको समस्याबाट समेत बच्न सकिन्छ । यसमा भएको फाइबर...
” कपडा जति नै महंगो होस् या सस्तो घटिया व्यवहारलाई लुकाउन सक्दैन ” ” मलाई जिन्दगीको अनुभव त त्यति थाहा छैन तर यति कुरा अवस्य जान्दछु कि सानो मान्छे आवश्यक मौकामा ठूलो काम आउँछ ” ” सम्बन्ध र बाटो तब समाप्त हुन्छ जब खुट्टा होइन दिल थाक्दछ ” ” जिन्दगीमा हमेशा दुई चिजलाई टाढा राख्नु...
उमेर छँदै सुगरको समस्या ֍ यसाे गर्नुहाेस्
काठमाडौं । हिजोआज विभिन्न कारण दिन उमेरमा नै सुगर, बाथ, प्रेसर, लगायतका रोगहरु देखि थालेका छन् । यस्ता समस्या सामान्य जस्तो लाग्ने भएपनि यिनले मानिसको आधा प्राण नै लिन्छन् । जब यि रोगले गाँज्दै जान्छन् तब स्वास्थ्य दिनानुदिन प्रतिकुल बन्दै जान्छ । यस्ता रोगहरुमध्ये आज हामी सुगरको समस्या र त्यसका निधनको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ ।...
महिलाले कसरी गर्छन हस्तमैथुन ֍
हाम्रो समाजका धेरैजसो मानिसले महिलाहरू हस्तमैथुन गर्दैनन् भन्ने मान्छन्, तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । महिलाहरूले पनि हस्तमैथुन गर्छन् । एक अध्ययनअनुसार ८२ प्रतिशत महिलाले हस्तमैथुन गरेको अनुभव भएको बताएका छन् । महिलाले कसरी हस्तमैथुन गर्छन् ? योनिलाई नै महिलाको प्रमुख यौनअङ्ग मानिन्छ । महिलाहरूमा योनिबाहेक अन्य विभिन्न अङ्ग पनि यौनका दृष्टिकोणले संवेदनशील हुन्छन् । जस्तै...
कतिपय दम्पत्तिहरु गर्भ धारण नहुने समस्याका कारण पीडित रहेका हुन्छन् । गर्भ बस्न नसक्नुमा शारीरिक कारणका अतिरिक्त हाम्रो आनी बानीले समेत ठूलो प्रभाव पारेको हुनसक्छ । तर यस्ता सामान्य कुरामा हामी ध्यान दिँदैनौं । शारीरिक सम्पर्क गरे गर्भ बसिहाल्छ भन्ने धारणा रहेको छ । तर यो नै सत्य होइन । शारीरिक कारणहरु पनि कतिपय हल...
धनी हुने मानिसको हस्तरेखा कस्तो ֍ तर बिज्ञानले यसाे भन्छ !
हस्तरेखा बिज्ञानको सहायताले मानिसको भूत, भविष्य तथा बर्तमान थाह पाउन सकिन्छ । यस्तै हस्त रेखाका आधारमा भाग्य निर्माण हुने ज्योतिसशास्त्रको दाबि छ । तर यस्ता प्रकारका रेखाहरु जन्म हुनु अगावै निर्धारण हुने जन्मपश्चात यस्तो रेखा निर्माण हुने बताइएको छ । यस्तै हस्तरेखाकै आधारमा जिवन ब्यतित हुने गर्दछ । धनी हुने मानिसको हस्त रेखा कस्तो हुन्छ...
एजेन्सी । गर्भधारणको चाहाना भएका तर बच्चा नभएर तनावमा परेकाहरुका लागि खुसीको खवर छ । हालै गरिएको एक अध्यनले महिलाको मुड अनुसार उनीहरुको प्रजनन क्षमता हुने देखाएको छ । डेली मेलमा प्रकाशित शोधका अनुसार महिलाको मुड र उनीहरुको प्रजनन क्षमताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । शोधकर्ताहरुले महिलाहरुको मुड अनुसार नै उनीहरु गर्भवती हुने कि नहुने भन्ने...
सुत्न अघि के गर्ने, के नगर्ने ֍
काठमाडौं । हामी प्राय खाना खाने वित्तिकै सुत्न जान्छौं । तर सुत्नु अघि केही कार्यहरु हामीले जीवन व्यवहारमा लागु ग¥यौं भने हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । आउनुहोस् यस बारे केही जानकारी लिऔं । छिटो सुत्न नजानेः धेरै छिटो सुत्न गयो भने गहिरो निद्रा नपर्न सक्छ । सुत्न जाने उपयुक्त समय भनेको राती १० वजे देखि...
कोलेस्ट्रल र मोटोपन सबैकोको लागि समस्याको विषय बनेको छ । यसबारेमा प्रशस्तै सामग्रीहरु पढ्न पाइन्छ, तर कसैले दिएको उपाय काम लाग्दैन । यहाँ हामी शरीरको कोलेस्ट्रल र अनावश्यक बोसो हटाउने घरेलु उपायको बारेमा चर्चा गर्नेछौं । जसलाई बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ र प्रभावकारी पनि हुन्छ । यो औषधी बनाउने सामग्रीमा तपाईंकै घरमा सहजै पाउन...
के महिला भनेका योनी मात्र हुन् ֍
प्रिय सञ्जयलीला भन्सालीज्यू, सुरुमा त तपाईंलाई बधाइ छ किनभने तपाईंको फिल्म रिलिज भयो । हुन त यसका लागि फिल्मकी मुख्य अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको आकर्षक कम्मरसँगै अन्य ७० वटा दृश्य गायब भएको छ तर ठूलो सफलता नै मान्नुपर्छ, एउटा सिर्जनशील काम गरेबापत तपाईंको टाउको गायब पारिएको छैन ! मासुको नाममा मानिसकै हत्या हुने आजको ‘सहिष्णु’ भारतमा...
पुरुषले किन पूरा गर्न सक्दैन् महिलाको यौनइच्छा ֍
आफूमा भएको यौन क्षमताअनुसार प्रत्येक पुरुषले आफ्नो महिला साथीको इच्छा पूरा गर्ने प्रयास गर्छन् । तर पनि महिलाले चाँहेअनुसार सन्तुष्टि दिन सक्दैनन् । अर्थात महिलाले आफूले चाँहेको सन्तुष्टि पमउन सक्दैनन् । जसमा पुरुषको यौन क्षमता कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । किन पूरा गर्न सक्दैन् पुरुषले ? यस्ता छन् कारण : जो पुरुष सम्भोगका दौरान सही...